Wararka Maanta: Sabti, Oct 27, 2012-Waddada isku xirta Gobollada Puntland oo ay roobab xooggani waxyeello u geysteen (DAAWO SAWIRRO)
Waddada isku xirta Gobollada Puntland oo ay roobab xooggani waxyeello u geysteen (DAAWO SAWIRRO) Sabti, Oktoobar 27, 2012 (HOL) - Roobabkii Dayrta ayaa si weyn uga curtay deegaanno badan oo ka tirsan gobollada Bari, Karkaar iyo Nugaal ee Puntland. Roobka ugu badan oo da’ay maalinnimadii shalay, waxaa goobaha uu sida fiican ugu hooray kamid ah magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo iyadu muddo sanad ah aan wax roob ahi arkin.
Inkasta oo ay hogasha da’day ahayd mid ay dadku si wanaagsan ugu diirsadeen, waxay hadana waxyeelo kasoo gaartey jidka laamiga ah ee isku xira magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho.
Biyo badan oo kasoo rogmadey togagga yar yare ee ka samaysma buuraha iyo dooxooyinka uu jidku dhex maro ayaa sababay in wadadu ay meelo badan ka go’do, dhaq dhaqaaqa gaadiidkuna uu meelaha qaar muddo saacado ah hakad galo.
Buundooyinka yar yar ee wadada hoosteeda mara in badan oo kamid ah ayey biyihu dibadda soo dhigeen, waxaana adag in ay gaadiidku si fudud uga gudbaan.
Inkasta oo aan weli wax dayactir ah lagu sameyn, waxaa hadana socota qiimeyn ay waddo hay’adda jidadka Puntland PHA, kuna aadan sidii loo ogaan a baaaxadda khasaaraha.
Dhowr mar oo hore ayey sidan oo kale biyaha roobku u waxyeeleeyeen jidka magaalada Boosaaso gala, oo isagu halbowle u ah isusocodka dadka iyo ganacsiga ee guud ahaan dalka.
Dableey hubeysan oo saddex qof oo shacab ah ku dilay deegaan hoos taga Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan 10/27/2012 8:05 AM EST
Sabti, Oktoobar 27, 2012 (HOL) — Kooxo hubeysan oo aan la garaneynin ayaa lagu waramayaa inay ku dileen galinkii danbe ee maalintii shalay sadax ruux oo rayid ah deegaan lagu magacaabo Oomane oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Bandhig-faneedyadii Xalay lagu dhigay Hargeysa oo Qiimahooda hoos loo dhigay, taas oo keentay in dhallinyaradu ka faa'iideystaan 10/27/2012 7:20 AM EST
Sabti, Oktoobar, 27, 2012 (HOL) -Shacabka ku dhaqan xaafadda Islii (Eastleigh) ee magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya Tuugo xilliyada habeenkii ah dhac u geysta dadka, kuwaasoo ka qaata teleefonnada gacanta iyo waxyaalaha ay wataan. Shacabka Degmada Marko oo ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay u geystaan ciidamada dowladda Soomaaliya 10/27/2012 4:01 AM EST